Dawladda Somaliya Oo Baarlamaanka Dalkeeda Ka Dhex Wadda Mooshin Ay Ku Laalayso Wada Hadalkii Ay Kula jirtay Dawladda Somaliland.
Dawladda Somaliya ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si xawli ah u wadda mooshin ka dhan ah wada hadalada ay la leedahay Somaliland, kaas oo saddex goor dib uga dhacay wakhtigii loogu tallo galay.
Mooshinkaas oo ay Baarlamaanka horgaynayaan xubno ka tirsan Baarlamaankaas Somaliya, waxa sida ay ilo xogogaali sheegayaan waxa dabada ka riixaysa dawladda Xasan Sheekh. Mooshinkaas ayaa lagu dalbanayaa inay dawladda Somaliya gebi ahaanba joojiso wada hadalada ay la leedahay Somaliland, iyagoo ku doodaya in distoorka dawladoodu aanu ogolayn in laga wada hadlo madaxbanaanida Somaliland.
Mooshinkan ayaa la sheegayaa inuu ku socdo si xawli ah, waxaanay u dhowdahay in Baarlamaanka la horgeeyo ka dib marka la soo dhiso xukuumadda cusub ee ay ka gudubto Baarlamaanka. Mooshinkan xildhibaanada ay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud u adeegsanayso ayaa la sheegayaa inay u badanyihiin xubno ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland.
Xukuumadda Somaliland oo aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino inay wax ka ogtahay dhaqdhaqaaqyadaas, ayaa ka gaabsaday ka hadalkeeda, waxase xubnaha aanu la xidhiidhnay ay sheegeen inay dawladda Somaliya oo muddooyinkan dambe ka cago jiidaysay wada hadalada ay wax kastaa suurtogal ka tahay.
Dawladda Somaliya ayaa tiraba saddex goor dib u dhigtay wada hadalada ay la leedahay Somaliland, iyadoo ku marmarsiiyoota inay ku dhex jirto duufaano siyaasadeed oo aan u saamaxayn ka qayb galka shirkaas, laakiin hadddana taas bedelkeed waxa ay dawladda Xasan Sheekh dibadda ugu baxdaa safaro aan macno badan ku fadhiyin. Waxaanay dadka diblomaasiyadda lafo-guraa aaminsanyihiin inay dawladda Somaliya raadinayso jid ay ka baxdo oo ay ku joojiso wada hadalka ay la leedahay dawladda Somaliland, waxaana suurtogal ah inay mooshinkan Baarlamaanka u aragtay jidka keliya ee ay kaga fakan karto wada hadaladaas.
Video: Faroole oo Uunsaday, C/samad oo Ku dul wareegay & Musharixiin Tumaya
Waxanu Halkan Idiinku Soo Gudbinaynaa Muuqaal Xiiso badan oo Amin Arts uu Ka Sameeyay C/raxamaan Faroole, Kuxigeenkiisa Dagaal Ooge Cabdi Samad Cali Shire & Musharixiinta Maamulkaasi.
Muuqaalkan ayaa Wuxuu Muujinaya C/raxamaan Faroole oo uunsaya, Loona Qaadayo “WAALIYOOW SAAR WAALIYOOW”, Cabdisamad oo Ciyaaraya Kuna Dul Wareegaya & Musharxiinta Durbaaka Ugaraacaya.
Hadaba nala Daawo Muuqaalka Xiisaha Badan ee Laga Sameeyay Faroole oo Uunsanaya , Cabdisamad Cali Iyo Sidoo kale Mushariiinta Utumaya.
Video fadeexo: MD Xasan shalay Injineer Maanta Professor “been lga daba tegay
Waxaanu Halkan Idiinku Soo Gudbinaynaa Muuqaal lasoo Helay Kaasi oo Muujinaya Xiligii Madaxaynaha Soomaliya Loo Doortay Hogaanka Xisbigiisa, Intii Uuna Kusoo Biirin Siyaasada Soomaliya.
Muuqaalkan oo Horay Looga Baahiyey Tvga Dawlada Ayaa Wuxuu Muujinaya In Madaxwaynaha Soomaliya uu Horay u Ahaa ENG, Halka Haatan Tvga laga Sheego Inuu Yahay Professor.
Dadka Soomaliyeed ayaa Markii Ay Daawadeen Muuqaalkan Qosolku ka Dhamaaday, Waxana Lagu Sheegay Arintaasi Been Qayaxan oo aan Geed loogu soo Gaban.
DHAGAYSO:Madaxweynaha Soomaaliya,Oo Sheegay Sababta Uu ku doortay Cabdiwali Sh. AxmedRead more
Madaxweynaha Somaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxa uu wareysi gaar ah siiyey maanta Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho isagoo aan ka wareysanay arimo kala duwan. Ugu horeyn Idaacadaha Muqdisho ayaa Madaxweynaha weydiisay Su’aashay:–Mudadii sanadka iyo barka ahayd ee Dawlada Somaliya shaqeyneysay isbar bar dhig markii uu kusameeyo guulihii dawlada gaartay iyo guul-darooyinkii ku dhacay? Madaxweynaha ayaa ku jawaabay:- -Waxa uu sheegay madaxweynuhu in marxalada hadda la joogo ay imaan karto gaabis islamarkaana ay ku dadaalayaan caqbadaha hortaagan dawlada sidii looga gudbi lahaa,Madaxweynuhu waxa uu tibaaxay in hormar ay kasameeyeen dhinaca amaanka,adeega Bulshada iyo dib uhabeynta Maaliyada. Su’aal kale oo Radio Kulmiye weydiisay Madaxweynaha ayaa ahayd: -Mudane Madaxweyne ma is leedahay hamiga ah in doorashada 2016-ka la qaban karo? Madaxweynaha ayaa Sidoo kale ku jawaabay:- -Waxa uu sheegay inay ku rajo weyn yihiin in ay udhacdo sidii loogu talo galay doorashada madaxtinimada labo sano kadib 2016-ka Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa su’aal kale oo la hor dhigay waxay ahayd waxyaabaha uu ku xushay Dr C/weli shiikh Axmed oo Ra’iisalwasaare dhawaan uu umagaacabay. Waxa uu sheegay inay ku xiran tahay shaqada uu qabto Dr C/weli islamarkaana amaan sidoo kale ujeediyey Dr Cabdi Faarax Saacid ra’iisalwasaarihii hore ee Somaliya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay Shirka maamul usameynta gobollada Koonfur Galbeed Somaliya ee baydhabo lagu qaban qaabinayo isagoo sheegay ka qeyb geli doonaan Shirkaasi,Midka Kismaayo ka shaqeynaya ee Axmed Madoobe hogaamiyana ay taageersan yihiin. Sidoo kale Madaxweynaha Somaliya Xasan Shiikh ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan hadii ay Nabad qaadanayaan Al Shabaab kuwooda Somalida ah. halkani ka Dhagayso waraysi
DHAGAYSO:HADAL CULUS:Foosiya xaaji Aadan Afka Furatay(Maqal)
Sii hayaha R/wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa war been abuur ah ku tilmaantay waraysi Dhowaan lala Yeeshay C/sitaar Oo katirsanaa Safaarada Soomaliya ee Dalka Kenya, Waxayna Sheegtay In Ninkaasi Shaqada Laga Horay Looga Caydhiyey. HALKAN dhegayso WARAYSI Waxay Sidoo kale ka hadashay in wasaaraddu ay dhaqaale lunsatay, ayadoo dhanka kale sheegtay in ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii loo soo bad baadin lahaa dhamaan muwaadiniinta Soomaalida ah ee ku go’doonsan dalka Koofurta Sudan. Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo wareysi gaar ah siisay Warbaahinta Dowlada ayeey kaga hadashay waxqabadka wasaaradda ee sanadki hore, iyadoo intaa ku dartay in wasaaraddu ay guulo waaweeyn ka gaartay xiriirta caalamka. Sidoo kale wasiirka ayaa soo hadalqaadday Arimo Badan oo Quseeya Xaalada Dalka Soomaliya Kuwaasi oo Bulshada u Dheg Taagaysay.
Saxaafada Turkiga oo Kaqortay in eey Waziirada Foosiyo Dhoor Jeer eey Tahriibisay
Saxaafada Turkiga ataa qortay ineey Waziirada Somaliya Fosiyo eey ula timi gabadh wafdiga lasocota shaqalaha duyuurada turkiga ayaa diiday ineey saaraan kadib waxeey qabatay maktabka duyuurada turkiga iyadoo ku hadideyso ineey xireyso maktabka hadaana lagu darin gabadha wafdigaan waliba gabadhaas iyadoona sidan wax visa ah .
wafdigaas ayaa kusocday dalka buljim Kadib gabadhan markii lagu qabtay madarka buljim sababta oo ah ineyna haysan wax sharci ah hadaba dawlada buljim baa shegtay ineyna aheen markii ugu horeysay iyadoo hada kohor dad ilaa laba qof ah sidaa wadanka usoo galisay.
markii lawareystay waxeey eey mid kamid ah ku dhawaqday ineey siisay 20000$
sida wafdiga loogu daro taas oo qaatay waziirada lacagtaas
wixii war ah kala soco jornalizem
wasiirada la soo dhisaayo oo laga dhaariyey kuwii taageersanaa Raiisal wasare Saciid iyo Xasan Sheikh oo ku abaal mariyey wasiiro xildhibaanadii taageersanaa
Madxda Soomalida ayaa siyaasada dalka ku maamula riyada uu markaa ku fikiraayo madaxweynaha iyadoona shaqsi kasta oo sharciga ku dhagan ama diida in xukunka laga dhiga kaligiis talis iyadoona aad moodid Madaxweynaha Soomaaliya cid walba oo la doorto waxoow meesha ka dhigaa guri isaga leeyahay ,dhowrkii sano ee uu talada haayana kuma dhaqmo sharco waxuuna sameyaan sidoow doono dhaqaalaha isagaa iska qaato mana jirta cid dhihi kartaa waxaan sharciga kuma ogola ee jooji iyadoona cidii arintaan kula dhagto laga dhaariyo xil in uu ka qabto dalka
Madaxweynaha waxaa moodaa in uuba ka kaligiis tali xuma ka badan yahay madaxweynahii milatariga ahaa kaa oo sida lagu yaqiinay la shaqeyn jiray cid wlaba oo la shaqeysa iyadoona dadka isaga mid yihiin
Waxaase la sheegay in uusanba waligeed soo marin madaxweyne ka kaligiis talis nimo xun madaxweyne Xasan Shekh waxuuna mar waliba xilka u magacabaa qof walba uu dad u xigta ama qofka ku xisbi ah iyadoona xiligaan la joogin dowlad hal xisbi uu doortay
Dowlada Xasan Sheikh waxay ku guul dareysatay dhanka cadaalada waxaana dadka masaakiinta wali la dhacaa guryahooda iyadoona wali darajada leysugu faano mana jirta sharci fadhiyo oo dalka oo dhan lagu maamulo marka laga reebo in sharciga uu qabto qof walba oo masakiin ah oo jeebka wax ugu jirin
Waxaa kale oo dowlada Xasan Maxamud ku fashilantay dhanka amniga iyadoona magaalada walina ka dhacaan dagaalo toos ah ka dhaco magaalada Muqdisho iyadoona wali ay jiraan dilal qorsheysan iyo qaraxyo badan oo dad badan ku dhintaan
Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamud ayaa ka dhaariyey in hal shaqsi xataa wasiirada lagu soo daro xildhibaanadii taageersanaa Raiisla wasare Sacid iyadoona sida muuqata madaxweyne Xasan Sheikh uu ku abaal mariyey xildhibaanadii Taageersanaa madaxweynaha kuwaa oo intabadan wasiira noqon doono
Dhagayso Isimada Pntland Oo Is Khilaaf Dhex Maray +Bayaan Ay Soo Saaren ?
Xubno Kamid Ah ka mid ah isimada Reer Puntland oo aan shalay ka qeyb galin kulan ay isimo Badan oo Kamid Ahaa Boqorka Beelaha Daarood Ay kasoo saareen Qodobo, ayaa maanta kulan ku qaatay magaalada Garoowe.
Kulankaan ayaa waxa uu ka dhacay guriga islaam ciise islaam waxaana ku sugnaa isimo Dhowr Ah, waxaana Gaashaanka Looga Duruuray Qodobadii Shirkii Shalay.
Halkan Ka DhagaysoKulankooda isimadan waxa ay ku falan qeeyeen arimaha doorashada iyo shaqada gudiga uu magacabay madaxweyne Faroole iyagoo ugaga mahadceliyay musharaxiinta Puntland tanaasulkii ay u sameeyen madaxweynaha.
Waxay kulankooda ka soo saareen isimadan qodobo ka badan kuwii shalay ka soo baxay kulankii isimada qaarkood ay ku yeesheen magaalada Garoowe, waxaana ku jira qodobo beeninaya kuwii shalay soo baxay.
Qodobada la xusi karo ee ku jira bayaanka isimadan maanta kulmay ayaa waxaa ka mid ah in gudiga xalinta khilaafaadka iyo soo xulista baarlamanka Puntland uu u madaxbanaan yahay howlihiisa shaqo islamarkaana uu shaacin karo waqti alaala waqtigiii ay soo dhamaato xulistooda xildhibaanada baarlamanka Cusub.
Waxa xusid mudan in qodobkan oo burinayo qodob shalay ka mid ahaa bayaankii shalay ay soo saareen tiro isimo 18 ah oo uu ku jiro boqorka daarood, kaas oo ahaa in gudigu soo gudbiyaan xildhibaanada isimada marjaca ah inta aysan ku dhawaaqin.
Xiisadan Ayaa Cirka Gashay Kadib Shirkaan maanta ka Dhacay Garoowe, Waxaana la Sheegay Xubnaha Maanta Shiray uu Cabdiraxmaan Faroole uu Dabada Ka Riixayo, Danihiisana Ay Fulinayaan.
War Culus: VOA oo Cod Sira ka duubtay Axmed Gadone “Lama Filaan (Dhegaysi)
Canjalad maqal ah oo la sheegay in laga duubay hogaamiyaha ururka Al-shabab Axmed Cabdi Godane ayaa ku dhaliilay kooxo uu ugu yeeray inay gaaleeysiiyaan dadka muslimiinta ah, wuxuuna uga digay mujtamaca dhaqamada noocaasi ah.
Godane, ayaa sheegay in kooxahan oo uu ugu magac daray takfiir iyo khawaarij, ay caado ka dhigteen inay gaaleysiiyaan qof kasta oo ayaga aan ku fikir ahayn, markii dambena ay gaaraan inay naftooda gaaleysiiyaan.
Digniinaha uu bixiyey Godane oo la duubay inta aysan kooxda Al-Shabab soo shaac bixin, ayaa hadda u muuqda kuwa Godane uu iminka ku dhaqmo.
HALKAN KA DHEGAYSO SIRTA BANANKA USOO BAXDAY & GODANEWarbixin ku saabsan canjaladaasi iyo codka Godane, waxaa diyaarisay idaacadda VOA, Lamana oga waqtiga saxda ah ee la duubay canjaladan iyo halka lagu duubay intaba.
WAR DEG DEG AH”DHAGAYSO:War kasoo Dhacay Magacbida wasiirada Cusub,Raysal wasaraha Oo Ku…
Ra’iisalwasaaraha Somaliya Dr C/weli Axmed Maxamed ayaa wada wadatashadii udambeysay uu kusoo dhisayo xubnaha cusub ee Xukuumadiisa.
R.W C/weli iyo Madaxweyne Xasan ayaa kulan arinta Xukuumada lasoo yagleelayo uga hadlayeen yeeshay isagoo dhawaana ra’iisalwasaaruhu uu soo magacaabayo golihiisa wasiirada.
Ilo wareed idaacada Kulmiye heshay ayaa waxay sheegayaan in wasiirada lasoo magacaabayo ay tiradooda laga yaabo inay gaaraan 25 wasiir.
Xubnaha loo soo magacaabi doono Xukuumada Cusub ayaa waxa sidoo kale la sheegay inay macquul tahay wasiiru dowlayaal iyo wasiir kuxigeeno xukuumadii hore katirsan inay jago wasiiro helaan in loo magacaabo.
Halkani Riix Dhagayso
DHAGAYSO:Gud. tarsan oo 4.5 Ka Soomaaliya xaran Ku Tilmamay Siweyna U Weeraray
Duqa Magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay nidaamka Afar beel iyo Bar (4.5) isagoo ku tilmaamay arintaasi mid cuuryaamisay hormarka dalka.
Tarsan ayaa sheegay inay goobaha shaqada la isku geeyo qaraabo ahaan,darajada la isku siiyo ina hebel isagoo ku baaqay in dadka aqoonta leh laga hormariyo kuwa la is xijinayo.
DAAWO:faroole Iyo cade Muse Maanta Siyaab leh garowe U dhex Socda,Kulan xasaasi Dhex Maray
Magaalada Garoowe waxaa goor dhow ku soo gaba gaboobay kulan ay isugu yimaadeen madaxweynihii hore ee Puntland Gen Cade Muuse Xirsi iyo madaxweynaha Hada ee waqtigiisu dhamaadka yahay ee Puntland Dr C/raxmaan Faroole.
Kulankooda la badan masuul oo uu dhax dhaxaad u ahaa Nuuradiin aadan Diiriye oo ka tirsan xafiiska siyaasada Somaaliya ee Qaramada Midoobay ayaa waxa uu ahaa mid qaatay saacado kooban waxaana markii dambe ay la hadleen saxaafada.
Nuuradiin oo ku heeray hadalka ayaa waxa uu sheegay in isku keenida labadan masuul ay tahay mid ka mid ah dadaalada loogu jiro sidii nabadgeliyo iyo nabad ay ugu dhici laheyd doorashada Soomaaliya ee ay wadaan qeybaha kala duwan ee isimada iyo qaramada midoobayba.
Madaxweynihii hore ee Puntland Gen Maxamuud Muuse Xirsi Cade ayaa isna sheegay in kulankii uu la yeeshay madaxweyne Faroole uu ahaa mid ku soo dhamaaday si wanaagsan oo is afgaradleh waxaana uu intaasi ku daray in ay isla garteen madaxweynaha in 1da bisha koobaad ay fariistaan Baarlamanka Cusub 8da Januaryna ay dhacdo doorashada Puntland.
Madaxweyne C/raxmaan Faroole ayaa isna sheegay in ay ka wada hadleen madaxweynihii hore arimo badan oo doorashada quseeya waxyaabo badanna ay isla meel dhigeen kuna faraxsanyihiin kulankooda.
Qodobada ay isku Raceen labada Dhinac,isla markasna ay ku heshiyeen
1-In Doorashada Puntland aysan dhaafin waqtigeeda.
2-In si wada jir ah ay uga shaqeeyaa sidii ay Doorashadu ay nabadgalyo ugu dhici lahayd.
3-iyo In khilaaf kasta oo yimaada lagu dhameeyo wada hadal.
Waxay noqoneysaa markii ugu horeysay oo ay madaxdan kulmaan wixii ka dambeeyay markii ay soo bexen dhaqdhaqaayada doorashada Puntland ee dalka saameeyay.
SAWIRRO:Madaxweyne Xasan oo si deg deg ku amray in diyaarad loogu diro Soomaalida ku go’doonsan K/Sudan
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib markii uu magaalada Nairobi kaga qeyb galay shir madaxeedkii aan caadiga aheyn ee Madaxda Urur Goboleedka IGAD oo looga hadlayay xaalada Koofurta Sudan.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku baaqay in si deg deg ah diyaaarad loogu diro shacabka Soomaaliyeed ee ku go’doonsan dalka Koofurta Sudan oo ay wali ka jiraan dagaalo u dhaxeeya dowladda iyo Mucaaradka.
Shir Madaxeedkii IGAD ayaa laga soo saaray in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada ka socda Koofurta Sudan, iyadoo labada dhinac loogu baaqay in xabad joojin inay sameeyaan.
Soomaali fara badan ayaa ku go’doosan magaalada Bor ee Gobolka Jonglie, halkaasoo todobaadkii hore ay dib u qabsadeen ciidamada dowladda, waxaana Soomaalida ay ku jiraan xero ay leeyihiin Ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobey, halkaasoo kumanaan kale oo reer Koofur Sudan ay gabaad u soo galeen.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shalay si heer sare ah looga soo sagootiyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Afhayeenka Baarlamaanka Jawaari iyo Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed Maxamed.
Daawo Kenya Oo Soobadhigtay Ciidamo Kumandoos ah Oo Aaad utooba Baran
Daawo Sawirada Madaxweynaha Obama oo Xaskiisa Kamasertay Malintii aaska Mandeela
Khaliif Xaashi Cawaale oo wali Musuq maasuq ka dhax wado airaboorka Aadan Cadde
Khaliif Xaashi Cawaale oo ah madaxa waaxda socdaalka qeybta Bixida ayaa waxaa aad uga qeylinaya shirkadaha diyaardaha ee is kala goosha Muqdisho iyo Stanbul ,Dubia kuwaa oo si qasab ah ku saarto dadka loo soo tahriibinaayo wadamada Yurub iyadoona dhacdadiisa ay wax ka qoreen wakaladaha wararka aduunka kuwaa oo sheegay in masuuliyiin ka tirsan waxaada socdaalka ku soo daabulaan diyaarada Turkish airline dad qaxooti ah oo u kala gooshayo wadamada Yurub si ay nolol uga helaan
war bixinta ayaa lagu sheegay in lacag badan laga soo qaato dadkaasi la saarayo diyaarda Turkiga iyadoona war bixinta lagu sheegin inta ay la egtahay lacagta laga qaato dadka
Madaxweyne Xasan oo Nairobi kula kulmay Diblomaasiyiin
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa kulamo gaar gaar ah shalay iyo xalay Nairobi kula qaatay Diblomaasiyiin islamarkaana kala hadlay xaaladda Soomaaliya.
Kulamadii uu madaxda IGAD uu kula qaatay shirkii shalay ee looga hadlayey arrimaha South Sudan, waxuu sidoo kale Madaxweynaha kulamo gaar gaar ah la qaatay madaxda ay ka midka yihiin Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia, Hailemarian Deselegn oo uu kala hadlay muhiimadda ay leedahay in la joojiyo collaada ka bilaabatay dalka South Sudan si looga hortago dagaal ehel ah oo ka dhaca South Sudan.
Sidoo kale madaxweynaha waxaa hoyga uu ka degenyahay Nairobi ku soo booqday diblomaasiyiin beesha caaalamka ah oo uu kala hadlay xiriirka dalalkaas iyo arrimaha Soomaaliya. Diblomaasiyiintii uu Madaxweynaha la kulmay waxaa ka mid ahaa Ergeyga Gaarka ah ee dowladda Mareykanka ee u qaabilsan Soomaaliya James P. McAnulty, Safiirka Belgium u fadhiya Kenya Bart Ouvry iyo Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika Alex Rondos iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha ayaa diblomaasiyiintii uu la kulmay kala hadlay xaaladda South Sudan iyo sida ay muhiimka u tahay in si deg-deg ah wax looga qabto, isagoo tusaale u soo qaadanaya arrimaha Soomaaliya oo uu sheegey haddii caalamku ay 1990kii wax ka qaban lahaayeen inuusan dalka Soomaaliya bur-bureen, isla markaana tusinayey in laga hortago collaadaha South Sudan si aysan isagu bedelin kuwo qatar u keena geeska Afrika.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale kala hadlay diblomaasiyiintaas xaaladda Soomaaliya una sheegey in Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed uu dhowaan soo dhisayo Xukuumad ka tarjumeysa marxaladda isla markaana isbedelka soo socda uu yahay mid rajo weyn gelinaya shacabka iyo dalka oo howlaha muhiimka ah la dar-dargelin doono, sida amniga, maamul wanaaga, dib u eegista dastuurka, dhaqan-gelinta Federaalka, fulinta dhammaan howlaha ku xusan dastuurka KMG ah si dalka loo gaarsiiyo doorashooyin xor ah. Madaxweynahu waxuu ka codsaday diblomaasiyiintii uu la kulmay inay dar-dar geliyaan sanadka 2014ka kaalmada iyo saacidaada dowladda Soomaaliya si ay ugu sahlanaato Xukuumadda inay howlaheeda dardargeliso.
madaxweyihii hore soomaliya Cabdi Qasin salaad xasan Oo Sir Ka Sheegay Dawlada Xasan Shiikh
Madaxweynihii horre ee Soomaaliya, Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa caawa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay xaaladda siyaasadda ee dalka Soomaaliya.
Cabdiqaasim oo ku sugan magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar, ayaa u sheegay Idaacad ku taalla Muqdisho in uu aad uga soco isbadal dhinacyada siyaasadda iyo ammaanka ee dalka.
Wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay khilaafka madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha mar kasta soo kala dhex gala, wuxuuna sheegay in dhaqankaas uu soo billowday dowladii laga soo dhisay dalka Jabuuti gaar ahaan deeganka Carta.
Cabdiqaasim ayaa tilmaamay Soomaaliya in ay faragallin ay ku hayaan waddamada gobalka iyo kuwa caalamka oo uu yiri hub, dhaqaale iyo siyaasad ayey ku taageeraan siddii Soomaaliya aysan u dagi lahayn, arrintaas “muddo 10-sanno laga joogo ayaan sheegay “ayuu yir.
Madaxweynihii horre ee Soomaaliya ayaa dhinaca kale tilmaamay in khilaafka madaxda dowladda inta badan uu sabab u tahay dastuurka qabyada ah oo aan qeexeynin awoodaha madaxda dowladda sida madaxweynaha, ra’iisalwasaaraha iyo baarlamaanka.
Wuxuu ra’iisal wasaaraha cusub Cabdiweli Sheekh Axmed ugu baaqay in uu la tashado madaxweynaha, baarlamaanka iyo shacabka Somaaliyeed
Ugu dambeyn Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa ka hadlay dagaalada ka dhacay qaybo ka mid ah gobalada dalka sida Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan, wuxuuna ku tilmaamay mid nasiib darro ah in xilligan dagaallo qaab qabiil u eg dalka ay ka dhacaan.
Dhagayso:- Qaarkamid Bulshadda Ku nool dagmadda Caabudwaaq Oo Ku baaqay Amniga Deegaanka
Xilli dagmadda caabudwaaq maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen falal lid ku ah amniga deegaanka ayaa arintaasi waxaa wax laga xumaado ku tilmaamy Qaar Kamid ah Bulshadda dagmadda, Caabudwaaq.
Mahad xasan Maxamed iyo faadumo Caanood guuleed oo Kamid ah Bulshadda Dagmadda caabudwaaq Oo Lahadlay Warbaahinta Saadaalnews Ayaa sheegay in loobaahan yahay in aan dagmada laga dhigin meel amaan daro caalamku
u arka waxaana ay xuseen in dagmadu horey unoqotay magaalada labaad ee Somalia ugu nabdoon.
Halkaan Guji oo Dhagayso warbxinta
Saraakiisha ammaanka Itoobiya ayaa ku eedeeyay Al-shabaab inay ka dambeysay weerar noociisu ahaa mid is-miidaamin ah oo ay doonayeen inay ka geystaan magaalada Addis Ababa ee xarunta Itoobiya.
Hay’adda sirdoonka Itoobiya (NISS) iyo booliiska federaalka dalkaa ayaa ku sheegay warbixin ay wadajir u soo saareen inay xireen shan qofood oo lagu tuhmay inay doonayeen inay fuliyaan qaraxaas bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay.
Booliiska ayaa sheegay in qaraxan la doonayay in lala beegsado garoonka kubadda cagta ee Addis Ababa oo ay xilligaas ku jireen taageerayaal ay ka badnayd tiradooda 20,000 oo qof oo daawanayay ciyaartii finalka ahayd ee is-reeb-reebka dalalkii u soo baxay koobka Adduunka ee sannadka 2014-ka ka dhici doona dalka Baraasiil, kaasoo ay ciyaarayeen xulalka Itoobiya iyo Nigeria.
Toddobaadyo ka hor intii aanay ciyaartaas dhicin ayaa waxaa xaafad ka mid ah xaafadaha Addis Ababa waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen laba qof oo la sheegay inay Soomaali ahaayeen, kaasoo saraakiisha booliisku ay ku sheegeen inuu ka mid ahaa kuwii la doonayay in garoonka lagu weeraro.
Eedeysanayaasha la qabtay oo kasoo muuqday telefishinka dalka Itoobiya ayaa sheegay inay tababar soo siisay Al-shabaab, ayna qorsheyanayeen inay weeraraan garoonka kubadda cagta, halkaasoo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan kuwa dowladda Itoobiya.
Sidoo kale, eedeysanayaasha la tuhunsan yahay ayaa sheegay in qorshaha uu ka mid ahaa inay bam ku weeraraan maalintii xorriyadda qowmiyadaha Itoobiya oo ka dhacday bishan magaalada Jigjiga ee xarunta Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Xubno sar-sare oo saraakiisha Itoobiya ah oo uu ku jiro ra’iisul wasaaraha dalkaas, HaileMariam Desalegn ayaa ka qaybgalay xafladdii qowmiyadaha ee lagu qabtay magaalada Jigjiga.
“Isku-daydayaas waa fashilmeen, kuwaasoo lagu doonayay in lagu qarxiyo garoonka kubadda cagta iyo xafladdii qowmiyadaha Itoobiya ee Jigjiga ka dhacday,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay hay’adda NISS-ta Itoobiya.
Weerarka la doonayay in lagu qaado garoonka kubada cagta ee Addis Ababa ayaa waxaa lagu soo beegay xilli dowladda Itoobiya ay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda amniga iyo markii ay Al-shabaab sheegtay inay weerartay rugta ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi bishii September ee sannadkan, taasoo ay ku dhinteen 67-qof.
Xarakada Al-shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegatay mas’uuliyadda dhowr weerar oo horay uga dhacay dalka Itoobiya, kuwaasoo ay ku sheegtay inay ahaayeen kuwo aar-gudanayso faragelinta milateri ee Itoobiya ay Somalia ku sameysay.
Itoobiya ayaa inta badan ku eedeysay in weerarrada dalkeeda ka dhaca ay geystaan kooxo ay taageerto dalka ay dariska yihiin ee Eritrea oo uu dagaal kala dhexeeyo, inkastoo Eritrea ay iska fogeysay eedeymayaas.
Ma jirto hadal kasoo baxay Itoobiya oo ay ku sheeganayso ama ku diidayso inay iyadu abaabushay weerarrada ay Itoobiya sheegtay in la doonayay in lagu qaado garoonka kubadda cagta dalkaas iyo xukii qowmiyadaha dalkaas ee bishan ka dhacay Jigjiga.
Soomaali badan oo ganacsiyo kala duwan ku haystay magaala madaxda Koonfurta Suudaan ayaa la sheegay in saacidihii la soo dhaafay ay soo galeen magaalada Kampla ee caasimadda Uganda, iyagoo kasoo cararay colaadaha sii kordhaya ee halkaasi ka jira.
Gaadiid gaaraya 400 oo gaari oo isugu jira noocyo kala gadisan ayaa la soo sheegayaa in ay gudaha u soo galeen xadka Uganda uu la wadaago dalka Koonfurta Suudaan ,waana tiradii ugu badnayd oo xadka soo gaarta inta la ogyahay tan iyo waqtigii ay bilowdeen dagaallada Jubba.
Sida laga soo xigtay xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Kampala dadka soo gaaray Uganda ayaa u badnaa ganacsato in badan ku noolaa Koonfurta Suudaan ,kuwaasi oo hantidii ay lahaayeen lagu bililiqaystay wadanka ay ka soo carareen.
“Waxaa la ii sheegay in la dhacay hantidii ay lahaayeen oo dhan oo ay la soo carareen naftooda si ay uga bad-baadiyaan dagaalka,“ ayuu yiri Abaadir Cabduqaadir oo kamid ah wariyayaasha Soomaaliyeed ee nool magaalada Kampala oo HOL la hadlayay.
Sidoo kale waxaa la sheegay in 43-gaari oo ah nooca loogu tala galay in ay dhisaan guryaha ilaa iyo hadda la la’ayahay, kuwaasoo ay lahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyo mid kamid ah darawalladii gaadiidkaasi wadayaasha ka ahaa.
Dowladda Somalia ayaa maalmo ka hor sheegtay in ay jiraan muwaadiniin ku geeriyooday dagaallada ka socda Koonfurta Suudaan, iyadoo ay jiraan kuwa kale oo ku jira xeryo ay dusha ka ilaalinayaan ciidamo ka socda Qaramada Midoobay.
Ugu danbayn, Soomaali badan ayaa la soo sheegayaa inay wali ku adag tahay ka bixitaanka magaala madaxda Koonfurta Suudaan ee Jubba, balse safaaradda Soomaaliya ee halkaas ayaa mar horeba sii bilowday in ay caawiso muwaadiinanta halkaa ku dhibaataysan.
Soomaali ku Geeriyootay iyo kuwo dhaawacmay Dagaallo kooxo Islaamiyiin ah ku dhexmaraya Waqooyiga dalka Yemen
Ugu yaraan sagaal ruux oo Soomaali ah ayaa lagu dilay in ka badan 40 kalena waa lagu dhaawacay dagaallo dalka Yemen ku dhex-maraya kooxo diimeedyo Sunni iyo Shiico ah.
MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA: "IGAD waa inay dadaal walba ku bixisaa sidii loo joojin lahaa Xiisadaha Koonfurta Suudaan"
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud oo ka qayb-galay shirkii madaxeedka dalalka IGAD ay Nairobi ku yeesheen maanta kaasoo looga hadlayay xaaladda dalka Koonfurta Sudan ayaa dalalka IGAD ugu baaqay inay juhdi ku bixiyaan sidii loo xalin lahaa colaadaha ka taagan dalka Koonfurta Suudaan.
Shirka hoggaamiyeyaasha dalalka IGAD ee Nairobi lagu soo gaba-gabeeyay ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha dalka Uganda, Yuweri Museveni, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Hailamarian Deselegn, madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dalka Suudaan, Bakri Xasan Saalex iyo wasiirka arrimaha dibedda South Sudan.
Kulanka ayaa warbixin looga dhageystay booqashadii wasiirrada arrimaha dibadda ee IGAD ay ku tageen magaalada Jubba ee dalka Koonfruta Sudan 19-kii - 21-kii December 2013. Iyagoo kulammo lasoo yeeshay madaxda dalkaas.
Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya, Tedros Adhonom oo ku hadlayay magaca wasiiradda IGAD ayaa sheegay in Xukuumadda Koonfurta Suudaan iyo kooxaha ka soo horjeeda ay ogolaadeen dhexdhexaadin iyo xabad joojin si xal loogu helo khilaafaadka jira.
Madaxweynaha Somalia oo ka hadlay shirka ayaa ku nuux-nuuxsaday inay muhiim tahay in IGAD ay si wadajir ah oo deg-deg ah ugu tafa-xaytaan sidii xal deg-deg ah loogu heli lahaa colaadaha ka jira Koonfurta Suudaan.
"Waa inaan muujinnaa dadaal kasta oo aan u joojinayno dhiigga daadanaya, isla markaana aanu dhex-dhexaadin lahayn kooxaha dowladda kasoo hor-jeeda si nabad iyo amni looga dhaliyo Koonfurta Suudaan,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Isagoo intaa ku daray ayuu yiri: “Soomaaliya 22-sano oo colaado iyo rabshado ah ayay soo aragnay, sidaas daraadeed waxaan ka digeynaa in collaadaha ka billowday Koonfurta Sudan ay sii dabo dheeraadaan, waana in dowladda lagu taageeraa qorshaha dib-u-heshiisiinta iyo nabadeynta oo ay hormuud ka noqotaa; bacdamaa ay haysato sharciyadii dalka. diyaar bay Soomaaliya u tahay inay waayo aragnimadeeda uga faa'iidayso Koonfurta Sudan.”
Dalka Koonfurta Suudaan ayaa waxaa 12 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday dagaallo ay ku dhinteen kumannaan qof oo shacab iyo ciidammo ah, iyadoo madaxda IGAD ay ku baaqeen in dagaalladaas si shuruud la’aan ah loo joojiyo lana bilaabo wadahadal muddo toban maalmood gudahood ah.
DAAWO VIDEO FADEEXAD, Tarsan: ”Xawaalad aan Dahab shiil aheeyn Malawayey oo lageeyo 10 doolar oo ka qaata Warqada dhalashada
Gudoomiyaha Gobolkaka Banaadir ahna maayarka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa sheegay in waraaqaha dhalashada laga qaadan karo xarunta dahabshiil taas oo la yaab noqotay
War Cusub: Axmed GODANE oo Dilay Sarkaal Miisaan Lahaa, & Hogaamiye Shabaab Ah oo Kashifay (Dhegayso)
Abu yaasir Al Muqdishi Ayaa Wuxuu ka Hadlay Dil Loogaystay Cabdirizaq Burundi oo Kamid Ahaa Raga Muhaahiriinta ah ee Ka bar bar Dagaalamayey Al Shabaab.
Dilka loo geystay Cabdirizaq Burundi ayaa waxaa uu soo baxay isbuucii la soo dhaafay waxaana wararku sheegayaan in rag kale lala khaarajiyey Cabdirizaq Burundi.
Kooxaha Amniyaadka ee ka amar qaata Axmed Cabdi Godane ayaa si gaar ah waxay u dileen rag malaayiin lacag ah uu dul dhigay Mareykanku iyadoo raggaas ay si toos ah loo khaarajiyey waxaana u danbeeyey dilkii Ibraahim Afgan, Macalin Burhaan iyo Abu Mansuur Al-Amriki.
DHEGAYSO SIR CULUS & QAABKA LOO DILAY “C/RISAAQ BURUNDI Cabdirizaq Burundi ayaa waxaa uu u xirnaa kooxda Axmed Godane mudo 8 bilood waxaana dilkiisa ka hadlay maanta Sh Abu Yaasir Al-Muqdishi oo ka mid ahaa culumada ururka Al-Shabaab ee haatan lafahooda uga cararay seefta Axmed Cabdi Godane.
Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hogaanka ururka Al-shabaab oo ku saabsan dilka Cabdirizaq Burundi oo la sheegay in la dilay maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay, lana rumeysan yahay inuu khaarijiyey Godane.